Olee otú Naghachi Photos si Canon EOS 6D Igwefoto
> Resource> Naghachi> Olee naghachi Photos si Canon EOS 6D Igwefoto
Enwere m ike Naghachi ehichapụ Photos si Canon EOS 6D?
Hi, m weere nza nke foto na m Canon EOS 6D igwefoto. Mgbe m kpebiri idetuo ha ka ha na kọmputa m, ọtụtụ n'ime foto nọ n'ebe ma foto m were taa na-arahụ. Ma m ka nwere ike na-agwa na emiela foto na-na-elu oghere site n'inyocha Njirimara na kaadị ebe nchekwa. Ndị furu efu foto bụ ihe niile banyere ezinụlọ m. Biko, gwa m ihe mere na otú m nwere ike nweta foto m azụ. Daalụ n'ọdịnihu.
Ee, ị na-ezi ihe. The emiela foto ndị ka na gị igwefoto. Ha na-ewere dị ka keerughi data site usoro na ha ga-efu ruo mgbe ebighị ebi nanị mgbe ha na-overwritten site ọhụrụ data na gị igwefoto ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa. Nke a na-eme ka o kwe gị omume naghachi foto site na Canon EOS 6D ọ bụrụ na ị kwụsị iji igwefoto gị ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa ebe photos furu.
E nwere ọtụtụ Canon EOS 6D foto mgbake omume na Internet n'ihi na gị nhọrọ. Wondershare Photo Recovery Ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac bụ ihe kasị pụrụ ịdabere na ike kacha ike otu n'ime ha. Ọ na-enye gị ihe ngwọta dị mfe iji naghachi furu efu / formatted / ehichapụ / rụrụ arụ foto gị Canon EOS 6D igwefoto. E wezụga na, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji weghachite furu efu foto ma ọ bụ audio faịlụ site na gị Canon EOS 6D, ngwá ọrụ a bụ uru kwa.
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute nke usoro ihe omume na-amalite Canon EOS 6D foto mgbake ugbu a!
Naghachi Photos si Canon EOS 6D na 3 Nzọụkwụ
Ọ bụla obere mgbanwe na gị igwefoto ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa nwere ike overwrite furu efu foto, n'ihi ya, ọ bụ nnọọ dị mkpa na-ahapụ gị igwefoto nanị ya mgbe photos na-efu.
Ugbu a, m ga-egosi gị otú naghachi foto site na Canon EOS 6D na Windows version nke Wondershare Photo Recovery.
Nzọụkwụ 1 Mgbe wụnye na-agba ọsọ ngwa na kọmputa gị, ị ga-ahụ ihe interface egosi niile na-akwado ngwaọrụ. Biko pịa "Next" button na-amalite Canon EOS 6D foto mgbake.
Rịba ama: Ị chọrọ jikọọ gị Canon EOS 6D igwefoto ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2 Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-depụta partitions na kọmputa gị. Ị nwere ike họrọ otu maka gị 6D igwefoto na pịa "iṅomi" ịchọpụta furu efu photos na ya.
Nzọụkwụ 3 Mgbe scanning, ị nwere ike naghachi ehichapụ foto site na Canon EOS 6D ugbu a. Ịnwere ike ihuchalu mbụ foto ka ego otú ọtụtụ nke foto nwere ike ịbụ restores si gị Canon EOS 6D igwefoto.
Na njedebe, ị dị nnọọ mkpa iji họrọ foto na ị chọrọ iji weghachite na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Top 15 Video converters maka Mac OS X EL Capitan
5 Ihe ị kwesịrị ịma banyere GPT nkebi
Olee otú ịrụ nkebi mgbake iji weghachi faịlụ site na a na-ehichapụ / furu efu nkebi
Gịnị bụ iPhone Iweghachi na Olee otú iji weghachi iPhone si iTunes na iCloud ndabere
Olee otú naghachi faịlụ furu Cut na Paste